E-Moscow, kukhona izindawo zokuhlala eziningi ezithakazelisayo. Nokho, aquarium at Chistye Prudy (bheka ngezansi isithombe) ingenye emangalisayo kakhulu.
Kulesi ipharadesi imele ehlobo unyaka wonke. Njengoba wavakashela Aquarium, elisendaweni enhliziyweni kwesihloko ophithizelayo, eduze esitimeleni "amachibi Oluhlanzekile 'esiteshini, uzithola hhayi kuphela ezindaweni ezishisayo, futhi izakhi kumnandi of Queen-amanzi. Izihambeli zalo ukusungulwa afakwa emhlabeni egqamile futhi engavamile, okuyinto akuhlangene ne esezithuthukiswe.
Aquarium emachibini Clean (ikheli - Chistoprudniy Boulevard, Isakhiwo 14 Ukwakha 3) ongaphakathi tabloid indandatho. Kukhona inxuluma ubudala, ehlotshiswe stucco izidalwa kumnandi. Indlu amafasitela abuke ichibi eMoscow, ethiwa ubuningi - "amachibi Oluhlanzekile '. Inxuluma elidala ehlala abantu olujulileyo okunosawoti efudumele. Uma ungazi lokho okuthenjiswa lapha ibekwe aquarium ke ukuqagela ukuthi egumbini akuyona a ton of amanzi, kuba cishe kungenakwenzeka.
Oceanarium at Chistye Prudy ekuqaleni wazalwa esitolo pet. Okwamanje, uyaqhubeka ukwenza imisebenzi engenhla. Izivakashi ukujabulela lapha aquarium ku iphrojekthi ngabanye, ukuthenga ukudla izinhlanzi kanye ecosystem avaliwe ekujuleni kolwandle, okuyinto akudingi kokungenela ngaphandle. Futhi lapha athengisa amanzi kwabakhileyo okuqukethwe ekhaya.
Enikeza izivakashi aquarium?
Pet esitolo, esemgwaqweni i inxuluma ubudala ku Hlanza Ponds, ithengisa izinhlobo engaphezu kwamakhulu amabili aquarium izakhiwo ezahlukene, okugcinwa zasolwandle nasemanzini agelezayo, imishini kanye aquaterrarium. Ukuze izivakashi aqua studio isebenza. ochwepheshe zayo kuzosiza anesitayela futhi ngokuvumelanayo angena emaqaqasini umthengi uthenge indlu izinhlanzi nezinye izilwane zasolwandle.
Isitolo isilwane inikeza Ukukhetha eziningi zezinhlanzi ezingenamgogodla ezivela emhlabeni wonke. Kukhona uMnyango ukufakwa aquarium yesondlo. Usipha namaklayenti ngamasevisi for ukufakwa okugcinwa. Ngaphezu kwalokho, kukhona ithuba isevisi yesiqinisekiso.
Pet shop ithengiswe semvelo avaliwe. Lokhu cubes ezincane obujwayelekile noma amabhola, okuyizinto symbioses zezitshalo nezilwane, okuyinto siphila emphakathini elibiyelwe. Ukuba khona izinto eziningi zemvelo ezifana alondolozwa izinqubo ezihlobene zokuphila. symbioses okunjalo akudingeki yokuhlanza, yokudla noma esikhundleni izingxenye. Ngokweyame ezinhlinzekweni kudingekile izimo zangaphandle umphakathi angaba khona isikhathi eside.
Yini ngokukhethekile budonsa izivakashi ukuba aquarium at Chistye Prudy? Izibuyekezo bayakufakazela ukuthi okunabileko iyona nokuchaza ulwandle nolwandle ukubukwa. Kule ndaba, ensimini behholo-esitolo ungaya kuphela ngemuva kokukhokha ngokubhadela ithikithi. intengo yayo akuyona ezimba, ngaphezu amaqembu uhambo nezingane zikhona izaphulelo.
Uhlelo ezihlongozwayo kuyoba usizo kubafundi kanye kulabo nje nesithakazelo emhlabeni ngaphansi kwamanzi. Nge izindleko amathikithi ingatholakala kwi-website esemthethweni aquarium.
izibonelo simiso semvelo
Maritime Aquarium at Chistye Prudy has aquarium izakhiwo ezinkulu, ngamunye okuyinto izinikele olwandle futhi ulwandle esishintshashintshayo ethize, iyatholakala kwi planethi yethu. Lapha ungabona emangalisayo simiso semvelo izibonelo. Iqoqo lihlanganisa ezihlala ezixhotsheni zamakhorali we Oceans Indian nasePacific Ocean. Kukhona "ifasitela" elalisemagcekeni ichibi elikhulu futhi Amazon emangalisayo. I izakhiwo aquarium izibonelo Lakes ecosystem Tanganyika futhi Malawi ngokufanele ezwekazini lase-Afrika.
Oceanarium ngesikhathi Clean Ponds inikeza izivakashi ubunyoninco abameleli engavamile futhi emangalisayo olwandle futhi izilwane zasolwandle ukuthi kukhona okugcinwa engaphezu kwamakhulu amabili ngamunye.
Iqoqo zilwane zangaphansi kwamanzi zibe ukushaywa ezihlukahlukene zalo nesivakashi onokuqonda kunazo. Kukhona engaphezu kwenkulungwane kwezinhlobo ezahlukene izinhlanzi exotic zezinto eziphila emanzini.
Izivakashi ziyakwazi ukubona ziyamangala lapho magic sea anemones nge tentacles ezinesihlungu, moraines toothed futhi ezihlukahlukene ezingenamgogodla. Phakathi izakhamuzi aquarium - jellyfish futhi nautilus, ingwane nezimfudu, eKamchatka izinkalankala kanye stingrays, piranha elinganeliseki futhi oshaka toothy.
Oceanarium ngesikhathi Clean Ponds othumele 'abafowabo' okuzingela e dvadtsatipyatimetrovom ngwenya isiyingi. Iqhubeka ehlukile Igumbi mnyama, izivakashi faka enhliziyweni iphakethe. Lapha kamnandi, ngifuna ngokuqinile emaceleni, ukuntanta by oshaka. Bazikhanga izivakashi nge isondele, olunembile nokunyakaza okusheshayo kanye bushelelezi Umumo sleek.
Oceanarium ngesikhathi Clean Ponds isonto ngalinye ngoLwezibili nangoLwezihlanu, kunesithembiso umbukiso eliyingqayizivele futhi ezithakazelisayo - ukusuthisa oshaka. It uyawuthanda impumelelo efanayo, ikakhulukazi izivakashi abasha.
Aquarium nge uthando olukhulu wokunakekela ezifuywayo. Kwaba sengathi okugcinwa. Ngamunye wabo indlu egcwele, kwesokudla, enhle futhi ezimibalabala. Ngamunye umnenke nenhlanzi unikezwa igama lalo. Zonke izilwane zasolwandle has a indaba ekhethekile. Moscow, Aquarium ku Clean Ponds - lena indawo lapho ephila abakhileyo oluyinqaba ulwandle nezilwandle. Lapha ungabona omkhulu Moray eels onikelwa igama lyric Russian Maroussia, kanye nautilus, okuyinto ufana ngwenya.
Uhlelo ngokuvakashela e aquarium eMoscow Chistye Prudy kahle wacabanga ukusungulwa Ochwepheshe. Tours baqhuba nsuku zonke. Iqembu ihlangabezana ngesivumelwano. Zingaba enkulu, ehlanganisa bonkhe eklasini bafundza incwadzi kanye nezincane, kuhlanganise umndeni ahlukene.
Ongoti, abathanda yilokho abanakho, Makungabikho muntu ngizithola. Bazakunazisa mayelana inhlanzi, ngenja noma-iselesele inhlanzi, ake phansi aquarium, lapho ungabona bukhoma cartoon abalingiswa "Finding Nemo", utshele horror izindaba mayelana oshaka futhi piranha, noma umane ngabe uthole i-starfish yangempela aquarium futhi ngeke anikele ukukunika igama lakhe kanye nesifo sohlangothi. Isithakazelo izivakashi okubangelwa incazelo izidalwa zasolwandle kanye amaqiniso athakazelisayo yezimpilo zabo, wenza ngendlela egqamile futhi ezimibalabala. Bona kungabonakala zonke aquarium.
Akhela phezu Hlanza Ponds liyindawo engcono kunazo zonke lapho izingane zingafundiswa ukuhlangabezana isayensi ezithakazelisayo - biology. Olwenziwe eemfundweni aquarium nakanjani captivate izingane, okubangela isifiso ukubuza futhi ukufuna izimpendulo zemibuzo yabo. Ngokwesibonelo, indlela ukufakazela ukuthi coral kuyinto isilwane, futhi kungakhathaliseki ukuthi kukhona ukukhanya ushaka caviar? Phakathi hambo ezithakazelisayo futhi enemininingwane ingane uyezwa amaqiniso ezintsha nezithakazelisayo nokuphila abakhileyo amadamu elise emakhoneni ezahlukene iplanethi yethu.
Kuleso simo, uma unquma ukuhamba aquarium ngokwakho, ungesabi ukuba miss lutho. Zonke amathangi ahlelwe ngokulandelana okunengqondo.
Ukuvakashela aquarium kuhle empilweni. Phela okugcinwa nethonya ezinye okuphumuzayo. Ngaphambi ezinye zazo kungaba bame amahora, ubukele isithombe ukuphila ngaphansi kwamanzi, ekusiza isimiso sezinzwa. izivakashi Ngakho aquarium, ngaphezu semali ulwazi olusha kanye nakho, futhi aziphumulele.
Ngesikhathi oceanarium eMoscow usebenza akvasalon ocebile, okuyinto ngokuqinisekile ukunambitha abanikazi ekhaya aquarium. Ngemva nohambo, izivakashi ungaba ukudla esitolo sokudla ethokomele.
Ingabe Aquarium kuwebhusayithi Hlanza Ponds esemthethweni (http: // www aquatis ru / oceanarium ..). Amakhasi alo ulwazi lemininingwane mayelana nokuthi izinkonzo ezenziwa inkampani, izinkambo olwenziwa nabakhileyo okugcinwa.
Valley of the Kings, Egypt ayekuyo, incazelo, umlando kanye scheme
Zhokhov Isiqhingi: nokuzwa nesithombe
Yevpatoriya, Quay: Umlando kanye Namuhla
EBulgaria, Varna. Varna, Bulgaria
Iholide Wellness eSlovenia.
Isizukulwane yakamuva anti-depressants. Antidepressant: Yikuphi okungcono? Izibuyekezo odokotela amanani
American umlobi yesayensi Norton Andre: Biography nemisebenzi
Lungiselela lohambo kungaba ku portal Locatus.ru
Ezolimo: ezolimo umkhakha. Amagatsha Ezolimo Russia
Udweba kanjani Patrick enhle?
I farmstead "Iparele", Cheboksary: incazelo, isithombe